​Farmaajo oo noqday Madaxweynaha Somalia
Guddoomiyaha golaha Barlamanka Somalia ayaa sheegay in wareeg saddexaad la aadi doono, Balse waxaa arrintaas beeniyay Xasan Sheekh oo qaatay go'aan aan la filayn kadib markii uu qiray in doorashada uu ku guulaystay Farmaajo islamarkaana ugu hambalyeeyay xilkaas.
MUQDISHU, Somalia- Ra'isal wasaarihii hore dalka Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo doortay Madaxweynaha Somalia kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdishu oo ay ku tartameen in kabadan 20 mudane, kuwaasoo uu ku jiray Madaxweynaha talada dalka hayay Xas ...
​Bannaan bax kale oo ka dhacay Muqdishu [Sawirro]
Soomaliya 11.02.2017. 13:44
​Farmaajo oo casho u sameeyay Murashaxiintii la tartantay
Soomaliya 10.02.2017. 00:26
Xildhibaan iska casiley guddiga doorashada Madaxweynaha Somalia
Soomaliya 01.02.2017. 17:35
​Farmaajo oo Muqdishu lagusoo dhaweeyay [SAWIRRO]
Soomaliya 20.12.2016. 13:56